Ihe Gị Banyere Anyị Page Soro Ndị a Omume Kasị Mma? | Martech Zone
Thursday, August 31, 2017 Wenezde, August 30, 2017 Douglas Karr
An gbasara Anyị peeji bụ otu n'ime ibe ndị ahụ akọwapụtara na ndepụta weebụ ọ bụla. Ọ bụ peeji dị oke egwu karịa ụlọ ọrụ na-enye ya otuto maka. Akwa gbasara Anyị a na-elekarị ndị na-arụ ọrụ na ndị ahịa anya ịmụtakwu banyere ndị nọ n'azụ ụlọ ọrụ. Anyị na-echefukarị na ọ bụghị naanị njirimara na uru ndị atụmanya ga - - ha chọrọ inwe obi ike na ha ga - arụ ọrụ na ndị ha tụkwasịrị obi na ha agaghị akwa ụta!
Ntụkwasị obi na nkwanye ùgwù bụ ihe a na-akwụ ụgwọ. Ima ihe n’abia site n’ibia n’elu obi. Ihe ndị a niile kwesịrị ịbụ ebumnuche njedebe nke usoro azụmaahịa gị, site na SEO yana ire ahịa ọdịnaya na mgbasa ozi mmekọrịta na email. Company'slọ ọrụ gị Banyere Anyị bụ ohere ọzọ ịkọ akụkọ nke ga - enyere gị aka itinye uche nke onye ahịa gị. (Na dị ka Blue Acorn si ọmụmụ na-egosi, ọ bụkwa ohere maka ọrịre.) Vincent Nero, Ọkachamara Ọkachamara Ọdịnaya Ọdịnaya
Siege Media nyochara ihe jikọrọ ya na ị na-arụ ọrụ dị elu gbasara anyị ma wepụta otu akụkọ akụkọ pụtara 50 Na-akpali Mmasị Banyere Anyị Ihe Nlereanya Peeji. Ha mepụtara ọmarịcha ihe ọmụma na-egosi omume 11 kachasị mma ịgbaso ka ị na-ekepụta nke gị:
uru uru - dobe uru bara uru gị karịa nke anọ ebe ndị ọrụ jiri 80% nke oge ha.
uru - ndị ahịa na-ahọrọ ịgụ banyere uru dị mma karịa ihe na-adịghị mma.
Kpalie Mmetụta - olile anya gị ga-abụ 2 ruo ugboro 3 nwere ike itinye aka na akụkọ mmetụta uche iji metụta ha.
Video - imirikiti ndị na-eme mkpebi na-ahọrọ ikiri vidiyo kama ịgụ ederede na ibe.
nchoputa - gụnyere onyonyo amata nke onye nrụpụta ụlọ ọrụ gị, ọ ga-eme ka ngbanwe 35% mụbaa!
Photos - ndị ahịa na-etinye 10% oge karịa na-elele foto karịa ịgụ ederede na ibe. Splurge maka ụfọdụ ịgba ndị ọkachamara!
Enweghị Foto Foto - foto foto abụghị naanị blah… ha bụ n'ezie isi ihe na-enweghị ntụkwasị obi na ụlọ ọrụ.
nleba - akaebe ndị ahịa na-abawanye ahịa site na 34%!
Nyocha Ziri Ezi - 72% nke ndị mmadụ na-ekwu nyocha dị mma na-eme ka ha tụkwasị obi na azụmaahịa mpaghara.
Kpọọ ka ị rụọ ọrụ - Gini ka ichoro ka onye obia mee mgbe ha lebachara peeji gi? Ntughari uzo ato site na itinye CTA!
Kpọtụrụ Info - 51% nke ndị mmadụ na-eche nke ọma ozi kọntaktị bụ ihe kacha mkpa dị na weebụsaịtị. (Anyị hụrụ n'anya itinye ya na ụkwụ na ibe ọ bụla!)
Nke a bụ infographic, Sayensị Na-akpata Nnukwu Anyị Peeji.
Tags: banyeregbasara anyịgbasara anyị omume kacha mmabanyere anyị peeji nkebanyere anyị peeji nkeomume kacha mmaMgbasa OziSayensị Na-akpata Nnukwu Anyị PeejiVincent Nero